Yintoni ipaki yesizwe: iimpawu kunye nokubaluleka | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 21/04/2022 12:00 | Yendalo
Indalo ifuna inkqubo yokhuseleko ekhuselwe ngumthetho ukuze ikhusele izityalo nezilwanyana. Iindawo zendalo ezikhuselweyo zikhona ukwenzela oku. Kule meko, makhe sibone yintoni ipaki yesizwe. Olu luhlobo lokhuseleko oluphezulu oluthintela imisebenzi ethile yabantu kwindawo yonke eyingqongileyo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba yintoni ipaki yelizwe, iimpawu zayo kunye nokubaluleka kwayo.
1 Yintoni ipaki yesizwe
2 Imisebenzi yepaki yesizwe
3 Ukubaluleka kweePaki zeSizwe
4 Iimpawu zeePaki zeSizwe
5 Iimfuno zodidi
6 imbali yepaki yesizwe
Xa sithetha ngokungqongqo, ziindawo ezikhuselweyo ezinandipha iwonga elisemthethweni nelomthetho elimiselwe ngokwemithetho yelizwe ezikulo. Le meko ifuna ukukhuselwa kunye nokugcinwa kwezityalo nezilwanyana ezityebileyo kunye nezinye iimpawu zayo ezikhethekileyo, ezidla ngokuba ziindawo ezinkulu ezivulekileyo ezinciphisa ukuhamba kwabantu. Ngenxa yokuba injongo kukukhusela, ukulondoloza nokuthintela ukuwohloka kwenkqubo yendalo ehlala kwezi ndawo, kunye neempawu ezibanika isazisi. Ukuze izizukulwana ezizayo zizonwabele ezi ndawo.
Imisebenzi yepaki yesizwe
Ezi ngongoma zilandelayo zibonisa ukubaluleka kwemisebenzi eyenziwa ziipaki zesizwe, kungoko urhulumente uye wathatha izigqibo zomthetho ukubakhusela.
Khusela izinto eziphilayo ezahlukeneyo kunye ne-ikhosistim
Khusela iindawo zokuhlala ezisengozini
Ukuqinisekisa iyantlukwano yenkcubeko
Khusela izityalo nezilwanyana ezisemngciphekweni wokuphela
Khusela indawo eyodwa yendalo
Gcina iimeko ezifanelekileyo zophando
Ukugcinwa kunye nokugcinwa kweendawo ze-paleontological
Ukukhuselwa kunye nokugcinwa kwemiqolomba
Kuphephe ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana
Kuphephe ukukhula ngokugqithisileyo
Ukubaluleka kweePaki zeSizwe
Ukubaluleka kwepaki yelizwe kunokususela ekukhuselweni nasekugcinweni kweendawo zayo zokuhlala kunye ne-ecosystem okanye iimpawu ezikhethekileyo zezityalo kunye nezilwanyana. Benza igalelo elikhulu kwibhalansi yezinto eziphilayo, njengoko bejolise ekukhuseleni iintlobo zezityalo kunye nezilwanyana eziqhelekileyo okanye ezikhethekileyo kule mimandla. Kodwa kukho enye into ephambili kwezoqoqosho, nakwilizwe lonke, esiza kuyibona kungekudala.
Ukwenza ingeniso: Mihla le bazisa imali eninzi kumazwe ukuze bafumane iikhonsepthi ezifana ne-ecotourism kunye nemisebenzi ye-adventure, iindawo zokukhempisha, ukunyuka iintaba kunye nokunye.
Veza imithombo yendalo ehlaziyekayo: Iipaki ezininzi zelizwe zinethuba elikhulu lobutyebi obunokuhlaziywa, kuquka ukuveliswa kwamanzi namaplanga acolekileyo, yaye ukuveliswa kwazo kuyalawuleka.
Ukugcinwa kobutyebi bendalo: Ezi ntlobo zeendawo ezikhuselweyo zidla ngokuzisa uzinzo lwemozulu kuninzi lwabemi behlabathi, nto leyo enceda ukuzinzisa imozulu, umhlaba kunye neminye imiphumo yeentlekele zemvelo ezinokubakho.
Njengoko sele sibonile, ukubaluleka kweepaki zendalo ezikhuselweyo kubaluleke kakhulu kwaye kubalulekile ukuze isizwe nehlabathi lisinde, kunye nesijikelezi-langa sethu.
Nangona intlangano yehlabathi iye yenza imigudu emikhulu yokukhusela imimandla yendalo, ijamelene nezisongelo ezinkulu. Inani elikhulu lezilwanyana zasendle zikwimeko esengozini, kwaye kuqikelelwa ukuba ama-50 ekhulwini aye anyamalala kwiminyaka engama-40 edluleyo, ubukhulu becala ngenxa yokurhweba ngokungekho mthethweni kunye nokuxhaphaza ngokugqithisileyo.
Iimpawu zeePaki zeSizwe
Ipaki yelizwe kufuneka iqulethe iimpawu ezithile eziza kuthathwa njengepaki yelizwe, kufuneka ibe nexabiso eliphezulu lendalo, iimpawu ezikhethekileyo kunye nobunye obuthile bezityalo kunye nezilwanyana. Kufuneka ifumane ingqalelo ephambili kunye nenkathalo eyodwa evela kurhulumente.
Iza kubhengezwa njengepaki yesizwe okanye indawo yokugcina izilwanyana, kufuneka iqulathe inkqubo emele yendalo. Ummandla omkhulu ovumela ukuguquka kwendalo kweenkqubo zendalo kunye nokungenelela okuncinci komntu kwixabiso layo lendalo, ngoko ke ukubaluleka kokwazi ukuba yintoni ipaki yelizwe ukuze ubanike ingqalelo efanelekileyo.
Ngokuphindaphindiweyo ziye zaba ziintsika zokugqibela zezilwanyana ezisengozini yokuphela. Zizityebi kwizityalo nezilwanyana kwaye zinendlela eyodwa yokumila kokwakheka komhlaba. Imele ivumele ulungelelwaniso lwendalo lobomi njengoko lwalukho ekuqaleni kwisijikelezi-langa sethu. Iinjongo ezininzi zezi paki kukukhusela izilwanyana zasendle kunye nokwenza umtsalane wabakhenkethi, kwaye ukhenketho lwendalo lwazalwa phantsi kwalo mbono.
Ukuze ummandla okanye ummandla uqwalaselwe ngaphakathi kwipaki yesizwe, kufuneka ube nezinye zezi mpawu zilandelayo, ekufuneka zicaciswe njengoko zinokwahluka ngokwemithetho okanye imimiselo yamazwe athile:
Umelo: Imela inkqubo yendalo ekuyo.
Ulwandiso: Yiba nomphezulu owaneleyo ukuvumela ukuvela kwayo kwendalo, ukugcina isimilo kunye nokuqinisekisa ukusebenza kweenkqubo zangoku ze-ikholoji.
Imeko yolondolozo: Iimeko zendalo kunye nemisebenzi ye-ikholoji iyona nto iphambili. Ungenelelo lwabantu kwimilinganiselo yalo kufuneka lunqongophele.
Ukuqhubekeka kommandla: Ngaphandle kwezinto ezinokuthetheleleka, ummandla kufuneka udibane, ungabi nazingxobo kwaye ungaqhekeki ophazamisa ukuvisisana kwe-ecosystem.
Ukuhlaliswa kwabantu: Amaziko asezidolophini okuhlala abantu akabandakanywa, ngaphandle kwezizathu ezivakalayo.
Ukhuseleko lomthetho: kufuneka ukhuselwe yimithetho kunye nesikhokelo somthetho welizwe lakho
Umthamo wobugcisa: Yiba nabasebenzi kunye nohlahlo lwabiwo-mali ukuhlangabezana neenjongo zolondolozo nolondolozo, kwaye uvumele kuphela uphando, ukufundisa okanye ukuxabisa imisebenzi yobuhle.
Ukhuseleko lwangaphandle: Ijikelezwe ngummandla onokubhengezwa njengoLondolozo lwaNgaphandle.
Iipaki zelizwe zidla ngokugadwa ngabagcini beepaki ukuze kuthintelwe izenzo ezingekho mthethweni ezinjengokusetyenziswa kwezilwanyana okanye ukurhweba ngokungekho mthethweni. Ezinye iipaki zelizwe zinokuba yimimandla emikhulu yomhlaba, kodwa kukwakho neendawo ezinkulu zamanzi, nokuba kuselwandle okanye kumhlaba owela phakathi kweepaki zesizwe ezixeliweyo. Mininzi imizekelo enjalo ehlabathini.
imbali yepaki yesizwe
Nangona ingeyiyo ingcamango njengoko sisazi namhlanje, kukho iirekhodi zendawo yokugcina indalo e-Asia, ebonakaliswe yiSinharaja Forest eSri Lanka, yabhengezwa ngokusemthethweni njengeNdawo yeLifa leMveli ye-UNESCO ngaphambi kowe-1988.
Kwada kwaba ngowe-1871, ngokudalwa kwe-Yellowstone National Park e-Wyoming, apho ipaki yokuqala yesizwe yazalwa ngokusemthethweni. Ngokomzekelo, i-Yosemite Park yadalwa ngo-1890, kwilizwe elifanayo ne-United States.
EYurophu, ingcamango yeepaki zelizwe ayizange iqalise ukuphunyezwa de kwangowe-1909, xa iSweden yawisa umthetho ovumela ukukhuselwa kwemimandla yendalo esithoba emikhulu. ISpain yayiza kuxhasa ukusekwa kweepaki zelizwe kwaye ngowe-1918 yakha ipaki yayo yokuqala yesizwe, iEuropean Mountains National Park.
Okwangoku wonke umntu ucacile malunga nokuba zeziphi iipaki zelizwe kunye nemisebenzi yazo, kukho iipaki zelizwe, ezihlala kwiLatin America malunga nekota yendawo, njengeMaya Biosphere Reserve eGuatemala, kunye nePegaso eArgentina Rito Moreno Glacier National. Ipaki.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuba yintoni ipaki yelizwe, iimpawu zayo kunye nokubaluleka kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Yintoni ipaki yesizwe